Profaịlụ ụlọ ọrụ - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
Mika (Tianjin) Pipeline Technology Co., Ltd dị na tianjin-otu n’ime obodo anọ dị na ya kpọmkwem n’okpuru ọchịchị ndị Republic of China, Tianjin bụ atụmatụ zuru oke nke okporo ụzọ siliki, rsezọ mbata nke otu Belt na Otu okporo ụzọ . Gọọmentị hiwere ebe mgbakwunye mba ụwa a na-agbakọta ọnụ.
Anyị na-enye ngwaahịa pụrụ ịdabere na pịpịpal plọp na-eche nche ma sie ike ， hụ na mpaghara anaghị agbapụta mmiri ， ngwa gụnyere omogbọ ala, ndị agha, sistemu ikuku, sistemụ injin, usoro jụrụ oyi na usoro kpo oku, usoro ịgba mmiri, sistemu mmepụta.Anyị nwere ụlọ ahịa nke mbụ, imewe, mmepụta, otu ndị na - esote mgbe ， companylọ ọrụ anyị nwere ndị ọrụ ruru ihe dị ka 100, n'etiti ha, enwere 15 tupu mgbe ahịa gasịrị, 8 ndị ọrụ aka (gụnyere ndị injinia dị elu 5), anyị nwere anwụ na-acha, pragmatic, elu ụlọ ọrụ ọdịnala.
Anyị na-enyekwa ọrụ aka ọrụ otu otu. Site na nkwakọ ngwaahịa ruo nnweta, ha abụọ na-agbaso ọkọlọtọ arụmọrụ na ozi ihe ọmụma.
Onye nchoputa Mr. Zhang Di, nke nwere ihe omuma ihe dika afọ iri na ise, na-enyocha ihe niile gbasara teknụzụ njikọ, yana nsụhọ ọhụụ. Steady mụbara ụlọ ọrụ ahụ, uru npụta. Ọganiihu mere nkebi ngwaahịa a n’iru n’iru. N'ihi ike ọrụ aka anyị, usoro nrụpụta zuru oke na ebu iji mepụta arụmọrụ dị elu, akụrụngwa nnwale zuru oke, na-achịkwa njikwa nke usoro ahụ nke ọma achọpụtala njikwa njikwa ngwaahịa, usoro, usoro, hụ na nkwụsi ike na ntụkwasị obi nke mma ahia.
A nabatala gị nke ọma ịbịa leta ụlọ ọrụ anyị na saịtị.